Shiinaha sida loo isticmaalo soosaarayaasha qalabka wax lagu shubo iyo kuwa keena | ORIENT
Sidee loo isticmaalaa lanjetyada dhiigga loo yaqaan Press Press?
Hadda maalmahanba dad aad iyo aad ayaa fiiro gaar ah u leh caafimaadkooda waxayna aadaan xarunta caafimaadka si caafimaadkooda looga siiyo iskaan buuxa. Sababtaas awgeed baahida loo qabo cirbadda dhiigga ayaa 3 jeer ka badan sidii hore. Sida loo isticmaalo manjarka dhiigga ayaa noqday mid aad muhiim u ah. Sida loo isticmaalo dheecaanka dhiigga si tartiib tartiib ah ayaa marba marka ka sii dambeysa muhiim u ah.
Haatan aan baranno sida loo isticmaalo nooc ka mid ah saxaafadda oo loo yaqaan 'lancet'.
Sidee loo isticmaalaa Lancet Press
Tallaabada 1 Soo bix furka ilaaliyaha oo tuur oo daboolka ku hay meel wanaagsan.
Tallaabada 2 Dhig cinjirka fimly goobta daloolka si aad u shaqeyso. Ha ka saarin qalabka ilaa la maqlo guji la maqli karo.
Tallaabada 3 Ku tuur cirbadda la isticmaalay weel fiiqan oo ku habboon oo leh daboolka manjarka.
Riix 2 nooc oo dhiig ah
Tallaabada 1 Furka leexinta illaa ay si fudud uga soocmeyso jirka manjarka. Ha jiidin.
Haddii aad jiido, irbadda waa la saarayaa oo qalabka fekerku wuxuu noqonayaa lancet la isticmaalay;
Tallaabada 2 Tallaabada 2 Dhig cinjirka fimly goobta daloosha si aad u shaqeyso. Ha ka saarin qalabka ilaa la maqlo guji la maqli karo.
Tallaabada 3 Ku tuur cirbadda la isticmaalay weel fiiqan oo ku habboon. Qalabka lantietiga la isticmaalay ayaa laga yaabaa inuu dhiig badani ku yaal.
Macluumaadka manka dhiigga ee ORIENTMED
ORIENTMED ayaa bixin karay furin dhiig oo kala duwan. Furka qalooca, qalabka wax lagu duubo, noocyo kala duwan oo fekerka saafiga ah, iyo ciribta ah Heel. Furayaasha dhiigga ayaa durbaba helay shahaadada CE ISO iyo FDA.
Iyada oo ku saleysan tayada wanaagsan iyo qiimaha macquulka ah, waxaan ku guuleysanay sumcad mas'uul ka ah degmooyin badan oo kala duwan, sida Jarmalka, Faransiiska, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, Koonfur Afrika, Mareykanka, koonfurta Ameerika iyo wixii la mid ah. Gaar ahaan Chile iyo Mid-bariga, waxaan leenahay macaamiil badan.